IIMAANA Archives - Page 4 of 14 - Ibsaa Jireenyaa
Kutaa darbe keessatti jiraachu malaykotaa mormuun iimaana akka diigu ilaalle jirra. Ammas, itti fufuun jiraachu jinni mormuun wanta iimaana diigu akka ta’e ni ilaalla.
May 31, 2020 Sammubani Leave a comment
Dhugumatti namni Rabbiin kan sodaatu fi Muslima ta’ee du’uuf hundee amanti isaa yoo beekee fi hojii irra oolchedha. Hundeen amantii arkaana iimaanati. Arkaanni iimaana kunniin qalbii keessa yoo hin jiraatin, namni amanti sirrii hin qabuu jechuudha. Kanaafu, bu’uura kana irratti xiyyeefachuun Muslima hunda irratti dirqama. Namootas itti waamun nama beekumsa qabu irratti dirqama. Kana yaada keessa galchuun hundeewwan iimaana jahan kitaaba kana keessatti haala salphaa fi nama hawwatuun ibsamanii jiru. Iimaana jechuun maal jechuudhaa? Garaagarummaan iimaanaa fi Islaama maali? Hundeewwan (arkaannni) iimaana maal fa’aa? Haalli sirriin amanan maalidhaa? gaafilee kanaa fi kan kana fakkaataniif kitaaba kana keessa ni argattu. https://sammubani.files.wordpress.com/2020/05/hiika-iimaanaa-fi-hundeewwan-isaa.pdf
Kutaa darbe keessatti sobaan nabiyyummaa himachuun Rabbii olta’aa irratti kijiba uumuu akka ta’ee fi iimaana akka diigu ilaalle jirra. Ammas itti fufuun akkaataa iimaana itti diigu haa ilaallu: